Mepee Movilforum: ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka | Nzukọ Ekwentị
Mepee Movilforum: ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka
Aha nke Open Movilforum, na ọ bụ ihe nkịtị, ọ bụ ezie na taa atụmatụ a adịghịzi. Open Movilforum bu ebumnuche nke Telefónica na Movistar na okike nke obodo mepere emepe nke na-adabere na obere ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị mmepe ọkachamara na mmalite. Olee mgbe e wepụtara ya? Gịnị ka ọ bụ? Ka anyị lee ya ọzọ.
1 Gịnị bụ Open Movilforum
2 Kedu mgbe amụrụ Open Movilforum?
3 Kedu ihe emeghe Movilforum maka?
4 Meghee Movilforum, ọrụ ịsụ ụzọ n'oge ahụ
5 Mepee Movilforum na Web 2.0
6 Open Movilforum APIs: API 1.0 na API 2.0
6.1 Ngwa API 1.0
6.2 Ngwa API 2.0
Gịnị bụ Open Movilforum
Ebe nrụọrụ weebụ Open Movilforum, atụmatụ nke Telefónica na Movistar kere na 2007, bụ a emeghe obodo iji nyere aka obere ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị ọkachamara na-emepe emepe emepe emepe na mmalite mmalite, maka okike na mmepe nke mashups na agagharị ngwọta dabere na ojiji nke oghe isi ngwaọrụ.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, e kere ya n’ebumnuche nke ịkwalite na ime ka mmekọrịta dị n’etiti ndị ọrụ, SMEs na teknụzụ na ndị ọchụnta ego. Na Open Movilforum ezubere ya nye ozi, ngwaọrụ na ihu maka okike nke ngwa mkpanaka. N'oge ahụ, ọ bụ mbụ ụzọ na Spain site na onye na-ahụ maka ekwentị na-elekwasị anya na ngwanrọ mepere emepe
Okike nke ngwa ngwa agagharị ọhụrụ a mere ka njikọta nke nkwukọrịta ekwentị na Internetntanetị. Na ọnụ ụzọ Open Movilforum anyị hụrụ APIs, SDKs, akwụkwọ, wiki na nkuzi ndị dị mkpa maka mmejuputa ọrụ ahụ.
Ọnụ ụzọ a Ọ rụkwara ọrụ dịka mkparịta ụka na isi iyi nke nkwukọrịta. nke ndị obodo na otu nkwado Telefónica.
Kedu mgbe amụrụ Open Movilforum?
Emepere Open Movilforum na 2007 site na Movistar site na nkwado nke ndị nrụpụta Nokia na oru gi NzukọNokia, wee si otú a na-akwado onyinye ahụ maka onye nrụpụta ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihu na ngwaọrụ dị ugbu a.
Movistar gosipụtara Open Movilforum na Campus Party (Valencia, Julaị 23-29, 2007). N'ụbọchị ndị ahụ, Movistar kpọrọ Open mobileforum free sọftụwia sọftụwia, bụ nke enyere ngwa kachasị mma maka Mobile 2.0 na ọdụ Nokia N800 na Linux na Wifi.
Obodo Open Movilforum nwere uzo mepere emepe na United Kingdom, obodo O2 Litmus mmepe, site na onye oru mkpanaka Telefónica O2. Telefónica malitere Movistar Ndị Mmepe Platform nke a mụrụ na ọrụ zuru ụwa ọnụ, site na kekọrịta, rụkọta ma rụkọọ ọrụ, nke ahụ zụkwara site na ahụmịhe gara aga nke Telefónica nwetara na ahịa dị iche iche dịka Spain na United Kingdom
Kedu ihe emeghe Movilforum maka?
Site na weebụsaịtị oghe.movilforum.com Enwere ike ịnwale ndị ọrụ ọrụ mkpanaka ọhụụ na ndị mmepe nke ndị ọzọ ọbụna tupu ịmalite azụmahịa ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, obodo mebere weebụsaịtị a nwere ike ịnweta ụdị ngwaọrụ na uru ndị Telefónica nyere.
Ebumnuche nke Open Movilforum gbasara ikwado mmepe nke ngwa ngwanrọ emeghe na-enye API dị mfe, ngwaọrụ na ozi zuru ezu banyere arụmọrụ nke mobiles. Na mgbakwunye, enyere usoro na ule dị mfe nke ukwuu maka mmemme n'ime ngwaọrụ yana maka ndị na-eji ọrụ Telefónica na netwọkụ.
Meghee Movilforum, ọrụ ịsụ ụzọ n'oge ahụ
Open Movilforum bụ akpa free software n'uche Onye ọrụ Spanish na-akwalite. Ebum n'uche bụ ka iru mmadụ niile Ndị SME. Nke ahụ bụ, ike nye ngagharị ngagharị na a hụrụ n'oge ahụ dị ka ihe dị oke ọnụ, mgbagwoju anya na amaghị ama.
Site na ọrụ a, ọ ga-ekwe omume ịnye obere ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị mmepe ngwanrọ na-emepe emepe na mmalite gburugburu nke mere ka mmepe nke ngwa ngwanrọ mepere emepe. Nke a bụ ụzọ ịsụ ụzọ, ebe ọ bụ na ọ dịbeghị mgbe ọ bụla onye ọrụ ekwentị na-arụ ya na Spain.
Mepee Movilforum na Web 2.0
Ejiri ọrụ a n'ime atụmatụ Telefónica Web 2.0. Site na weebụsaịtị ya (open.movilforum.com) A na-enye API dị mfe, ngwa ọrụ na ozi zuru ezu banyere etu igwe mkpirisi ekwentị siri rụọ ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, e nyere ngwaọrụ nke mere ka usoro nnweta na ule dị mfe ma maka mmemme n'ime ngwaọrụ yana maka ndị na-eji ọrụ netwọk Telefónica.
Mepee Movilforum bụ ebe emepere emepe ebe ndị otu niile nwere ike ịgụnye ọrụ ha. Ndị API toro dị ka Telefónica na ndị otu nyere aka na weebụsaịtị. Echere m, ọ bụ ọrụ dị ka repository kedu ihe eji ya eme mashups.
Open Movilforum APIs: API 1.0 na API 2.0
Ngwa API 1.0
Mepee Movilforum malitere na Ngwa API 1.0, na-eji ọrụ ndị Movistar na-enye na usoro nke SDKs nyere ohere iji API site na mmemme. Ndị API izizi ndị a nyere ohere ịnweta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke arụ ọrụ dị iche:
SMSnata SMS na mail (pop3): nyere ohere ka ibugharịa ma nata ozi email ndị ahụ dị mkpirikpi (SMS) zigara na nọmba ekwentị Movistar.
Na-ezipụ SMS: kwere ka izipu nke SMS site na interface interface.
Na-ezipụ MMS: kwere ka izipu MMS site na interface http.
SMS 2.0: IM arụmọrụ site na SMS (ndepụta ndị enyi, ọnọdụ ọnụnọ, izipu ozi na ntanetị, ịnata ha mgbe ejikọrọ)
Na-eṅomi: O mere ka ị nweta listi ịkpọtụrụ gị site na SIM site na interface http.
Nnabata oku vidiyo (dabere na SIP, na ụdị beta): nyere ohere ịnata oku vidiyo na PC ma chekwaa iyi odiyo na vidiyo.
Push Akpaaka Na -akpaghị aka: O kwere ka ozi izipu Wap Push gaa na ọnụ ekwentị mkpanaka site na interface http.
Ngwa API 2.0
Mgbe e mesịrị, na njedebe nke 2009 na n'oge 2010, Open movilforum na-arụ ọrụ na mwepụta nke API ọhụrụ na Spain. Oge a, ndị API dị iche iche na usoro WEB 2.0. N'ime ha, ha mere ka ọ pụta ìhè:
Na-ezipụ SMS / MMS.
Nnata na URL nke SMS / MMS.
Izi ozi (SMS / MMS) 'dọpụta'.
Geolocated ozi (SMS / MMS).
Obi abụọ adịghị ya, site na iji API ndị a dị mfe, enwere m ike ịnye usoro ngwaọrụ nke mere ka usoro nnweta na nnwale dị mfe ma maka mmemme n'ime ngwaọrụ yana maka ndị na-eji ọrụ netwọk Telefónica.
Open Movilforum bụ ọrụ dị nnọọ elu n'oge ahụ, na-asụ ụzọ na Spain, ebe ọ bụ ihe ngwanrọ mbụ nke onye ọrụ Spanish na-akwalite. Ihe ezubere bụ iru SME niile. Ma gị onwe gị, ị maara banyere mbido a nke Telefónica bidoro na 2007? Hapụ anyị ajụjụ gị na nkwupụta, anyị ga-enwe obi ụtọ ịgụ gị.